Gweru Provincial Hospital: Bazi rezveHutano Richange Riine Mari Shoma Gore Rinouya
Munyori mukuru mubazi rezvehutano, Doctor Gerald Gwiji, vanoti bazi ravo rine bhajeti re$1.3 billion muna 2018 asi bazi rezvemari rinoti rinokwanisa kuwana madhora mamiriryoni mazana matatu nechidimbu chete.
VaGwinji vari kukurudzira nhengo dzeparamende mukomiti inoona nezvehutano kuti vakurudzire hurumende kuti iwedzere mari inopihwa kubazi ravo kuti vakwanise kuite basa ravo nemazvo.
Pamamiriyoni mazana matatu nechidimbu chemadhora ichapihwa kubazi iri, zhinji yacho, $290 million, ichaenda kumihoro yevashandi zvinosiya mari shomanana yekutenga mishonga, michina yebasa nezvimwe.
Vanoti masangano anopa rubatsiro nedzimwe nyika ndivo vave kutobatsira kurapa nemabasa emubazi ravo.
Vanoti semuenzaniso, zvikamu makumi masere kubva muzana zvemapiritsi ese ezvirwere zveTuberculosis, Malaria neHIV zvinotengwa neveGlobal Fund.
Asi Dr Gwinji vanoti zvinhu zvave kunetsa kune masangano nenyika dzinopa rubatsiro sezvo rubatsiro rurikudzikira.
Vanotiwo bazi ravo riri kuedza dzimwe nzira, dzekutsvaga mari asi zvinhu zviri kunetsa.
Vanoti zvipatara zviri kutadza kuwana mari kubva kuvarwere sezvo vari kuomerwa nehupenyu uye vamwe vachitotadza kuenda kuzvipatara nekushaya mari.
Dr Gwinji vanotiwo homwe yeHealth Fund Levy iyo yakaumbwa gore rino kubva kumuripo hwekutengeswa kwemari yeairtime yembosha nhare iri kubatsirawo chose mukutenga mishonga uye gore rino vanotarisira kuwana mamiriyoni makumi matatu nematanhatu pamari iyi.
Mumwe mugari wemuHarare, Amai Rosemary Ushe, vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kupa mari yakawanda kuhutano pane kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutengera madzishe dzimotokari.
Imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi, VaMasimba Manyanyaya, vatiwo hurumende iri kutambisa mari pazvinhu zvisina basa zvakaita sekutenga dzimotokari, kufamba kunze kwenyika uye inofanira kushandisa mari iyi kusimudzira maindaisitiri kuti ikwanise kuwana mari yekutsigira hutano.
Munyori mukuru musangano ranachiremba vanorwira kodzero dzevanhu, Dr Evans Masitara, vati veruzhini vanofanira kutarisira kuti zvinhu zvicharamba zvichedzirikira munyaya dzehutano.
Vanotiwo vanachiremba, vanamukoti nevamwe havasi kufara nemihoro yavanotambiraizvi zvichaita kuti vazhinji vavo vaende kunoshandira kune dzimwe nyika.
Mune imwewo nyaya, mabharani mukuru weparamende yeZimbabwe, VaKennedy Chokuda, vazivisa kuti bazi rezvemari raburitsa mamiriyoni mana emadhora ekupa nhengo dzeparamende mari yadzo yekubatsirikana pamwe nemafuta edzimotokari.
Mugwaro ravanyorera kunhengo dzese dzeparamende, VaChokuda vati mari yi ichatanga kuoneka mumabhanga nemusi weMugovera uye vavimbisa kuti imwe mari yasara ichabhadharwa Zvita usati wapera.
Paramende yange ine chikwereti chemamiriyoni gumi nemashanu iri mari yekubatsirikana yenhengo dzeparamende kubva muna 2013.
Zvichakadai hurumende haisati yazivisa kuti ndiana achange achitungamira basa rehurumende muparamende zvichitevera kuvandudzwa kwakaitwa makurukota ehurumende nguva pfupi yapfuura.
Mutevedzeri wemutauriri weNational Assembly, Amai Marble Chinomona, vakaudza nhengo dzedare iri kuti hurumende ichazivisa paramende nezvenyaya iyi munguva pfupi inotevera.
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, ndivo vange vaine chinzvimbo ichi asi vamwe vave kuti gurukota rezvemitemo Vahappyton Bonyongwe ndivo vanofanira kutora chigaro ichi.